မြန်မာနိုင်ငံ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရှိ ဆိုင်ခန်း / ရုံးခန်းများ ရောင်းရန် | ShweProperty.com
ရောင်းရန် - အင်းစိန်၊ ညောင်တပင်လမ်း ရှိ ရောင်းရန်ရှိသော ဂိုဒေါင်
Listed9June 2018
Property ID: S-1028354
ရောင်းရန် - လှိုင်သာယာစက်မှုဇုန်တွင်2RC အထပ်ပါသော ဂိုထောင်ရောင်းရန်ရှိသည်
Listed 8 June 2018
Property ID: S-1058910
ရောင်းရန် - Shop House for sale ( fully decorated)
Thiriyadanar Wholesale Market. Fully decorated,can start business...
Thiriyadanar Wholesale Market. Fully decorated,can start business
Advertiser : Zaw Aung
Property ID: S-1022498
Office no : 09420093994
ရောင်းရန် - လှိုင်သာယာ န၀ဒေးအိမ်ယာ ရှိ RC 2ထပ် ဆိုင်ခန်း ရောင်းမည်
Property ID: S-1035115
ရောင်းရန် - ဗိုလ်အောင်ကျော်လမ်းမပေါ်တွင် ဈေးဆိုင်ခန်းရောင်းရန်ရှိသည်
Property ID: S-1060679
Advertiser : ဒေါ်သန္တာအေး
Property ID: S-1021447
Office no : 09421077816
ရောင်းရန် - DAGON UNIVERSITY အနီး၊ ဘူတာအနီး ဒဂုံ အရှေ့  ၁၃၁ ရပ် ကွက်၊ အမှတ်…
Advertiser : THIHAR MYINT
Property ID: S-1034442
Office no : 09978665671
ရောင်းရန် - ဘုရင့်နောင်ပွဲရုံ
ဘုရင့်နောင်ပွဲရုံဝင်းအတွင်း ပွဲရုံဆိုင်ခန်းရောင်းရန်ရှိသည်။ မြေ(40×60)ပေ၊ 2R/C၊ HT ဈေးနှုန်း=6500 သိန်း...
ဘုရင့်နောင်ပွဲရုံဝင်းအတွင်း ပွဲရုံဆိုင်ခန်းရောင်းရန်ရှိသည်။ မြေ(40×60)ပေ၊ 2R/C၊ HT ဈေးနှုန်း=6500 သိန်း
Property ID: S-1023908
ရောင်းရန် - သီရိမြိုင်(၈)လမ်းတွင် တိုက်ခန်းသန့်ရောင်းရန်ရှိသည်။
ကျွန်ုပ်တို့ Perfect World Real Estate Servicesတွင် အဓိကဈေးကွက်ဝင်မြို့နယ် (၂၅) မြို့နယ်အတွင်းရှိကွန်ဒိုအငှား/အရောင်း၊ လုံးချင်းမြေကွက်အငှား/အရောင်း၊တိုက်ခန်း/မြေညီအငှားအရောင်း၊တိုက်ခန်းအလွှာမြင့်…...
ကျွန်ုပ်တို့ Perfect World Real Estate Servicesတွင် အဓိကဈေးကွက်ဝင်မြို့နယ် (၂၅) မြို့နယ်အတွင်းရှိကွန်ဒိုအငှား/အရောင်း၊ လုံးချင်းမြေကွက်အငှား/အရောင်း၊တိုက်ခန်း/မြေညီအငှားအရောင်း၊တိုက်ခန်းအလွှာမြင့်…
Perfect World Real Estate
ဖုန်းဆက်ရန်09, 440 9988 10
09, 440 9988 10
Property ID: S-1073808
Asking Price : 315 သိန်း
Mobile : 09-440 9988 10, 09-2533 25050
Office no : 09-440 9988 40, 09-440 9988 50
ရောင်းရန် - E2-2003, တောင်ဥက္ကလာပတွင် မြေညီထပ်အခန်းရောင်းရန်ရှိပါသည်။
Property ID: S-1134845
ရောင်းရန် - သန်​လျင်​မြို့ စလစ်​​ခြံ​မြေ ​ရောင်းမည်​
ခွဲ​ရောင်းခြင်းပါ ​ပေ ၄၀×၆၀ တစ်​ကွက်​လုံးလည်း​ရောင်းပါမည်​...
ခွဲ​ရောင်းခြင်းပါ ​ပေ ၄၀×၆၀ တစ်​ကွက်​လုံးလည်း​ရောင်းပါမည်​
Advertiser : ကိုထက်​စိန်​
Property ID: S-1022295
Office no : 09254407337;09798167699
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရှိ ရောင်းရန် ရုံးခန်း / ဆိုင်ခန်း မြန်မာပြည်ရှိ ရောင်းရန်ရုံးခန်း / ဆိုင်ခန်း ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရှိ ရောင်းရန် အိမ်ခြံမြေများ
အလုံ ရှိ ရောင်းရန် ရုံးခန်း / ဆိုင်ခန်း ဗဟန်း ရှိ ရောင်းရန် ရုံးခန်း / ဆိုင်ခန်း ဗိုလ်တထောင် ရှိ ရောင်းရန် ရုံးခန်း / ဆိုင်ခန်း ကိုကိုးကျွန်း ရှိ ရောင်းရန် ရုံးခန်း / ဆိုင်ခန်း ဒဂုံ ရှိ ရောင်းရန် ရုံးခန်း / ဆိုင်ခန်း ဒဂုံမြို့သစ်အရှေ့ပိုင်း ရှိ ရောင်းရန် ရုံးခန်း / ဆိုင်ခန်း ဒဂုံမြို့သစ်အနောက်ပိုင်း ရှိ ရောင်းရန် ရုံးခန်း / ဆိုင်ခန်း ဒဂုံမြို့သစ်မြောက်ပိုင်း ရှိ ရောင်းရန် ရုံးခန်း / ဆိုင်ခန်း ဒဂုံမြို့သစ်ဆိပ်ကမ်း ရှိ ရောင်းရန် ရုံးခန်း / ဆိုင်ခန်း ဒဂုံမြို့သစ်တောင်ပိုင်း ရှိ ရောင်းရန် ရုံးခန်း / ဆိုင်ခန်း ဒလ ရှိ ရောင်းရန် ရုံးခန်း / ဆိုင်ခန်း ဒေါပုံ ရှိ ရောင်းရန် ရုံးခန်း / ဆိုင်ခန်း
လှိုင် ရှိ ရောင်းရန် ရုံးခန်း / ဆိုင်ခန်း လှိုင်သာယာ ရှိ ရောင်းရန် ရုံးခန်း / ဆိုင်ခန်း လှည်းကူး ရှိ ရောင်းရန် ရုံးခန်း / ဆိုင်ခန်း မှော်ဘီ ရှိ ရောင်းရန် ရုံးခန်း / ဆိုင်ခန်း ထန်းတပင် ရှိ ရောင်းရန် ရုံးခန်း / ဆိုင်ခန်း အင်းစိန် ရှိ ရောင်းရန် ရုံးခန်း / ဆိုင်ခန်း ကမာရွတ် ရှိ ရောင်းရန် ရုံးခန်း / ဆိုင်ခန်း ကော့မှုး ရှိ ရောင်းရန် ရုံးခန်း / ဆိုင်ခန်း ခရမ်း ရှိ ရောင်းရန် ရုံးခန်း / ဆိုင်ခန်း ကွမ်းခြံကုန်း ရှိ ရောင်းရန် ရုံးခန်း / ဆိုင်ခန်း ကျောက်တံတား ရှိ ရောင်းရန် ရုံးခန်း / ဆိုင်ခန်း ကျောက်တန်း ရှိ ရောင်းရန် ရုံးခန်း / ဆိုင်ခန်း
ကြည့်မြင်တိုင် ရှိ ရောင်းရန် ရုံးခန်း / ဆိုင်ခန်း လမ်းမတော် ရှိ ရောင်းရန် ရုံးခန်း / ဆိုင်ခန်း လသာ ရှိ ရောင်းရန် ရုံးခန်း / ဆိုင်ခန်း မရမ်းကုန်း ရှိ ရောင်းရန် ရုံးခန်း / ဆိုင်ခန်း မင်္ဂလာဒုံ ရှိ ရောင်းရန် ရုံးခန်း / ဆိုင်ခန်း မင်္ဂလာတောင်ညွှန့် ရှိ ရောင်းရန် ရုံးခန်း / ဆိုင်ခန်း မြောက်ဥက္ကလာ ရှိ ရောင်းရန် ရုံးခန်း / ဆိုင်ခန်း ပန်းပဲတန်း ရှိ ရောင်းရန် ရုံးခန်း / ဆိုင်ခန်း ပုဇွန်တောင် ရှိ ရောင်းရန် ရုံးခန်း / ဆိုင်ခန်း စမ်းချောင်း ရှိ ရောင်းရန် ရုံးခန်း / ဆိုင်ခန်း ဆိပ်ကြီးခနောင်တို ရှိ ရောင်းရန် ရုံးခန်း / ဆိုင်ခန်း ဆိပ်ကမ်း ရှိ ရောင်းရန် ရုံးခန်း / ဆိုင်ခန်း
ရွှေပြည်သာ ရှိ ရောင်းရန် ရုံးခန်း / ဆိုင်ခန်း တောင်ဥက္ကလာ ရှိ ရောင်းရန် ရုံးခန်း / ဆိုင်ခန်း တိုက်ကြီး ရှိ ရောင်းရန် ရုံးခန်း / ဆိုင်ခန်း တာမွေ ရှိ ရောင်းရန် ရုံးခန်း / ဆိုင်ခန်း သာကေတ ရှိ ရောင်းရန် ရုံးခန်း / ဆိုင်ခန်း သံလျင် ရှိ ရောင်းရန် ရုံးခန်း / ဆိုင်ခန်း သင်္ဃန်းကျွန်း ရှိ ရောင်းရန် ရုံးခန်း / ဆိုင်ခန်း သုံးခွ ရှိ ရောင်းရန် ရုံးခန်း / ဆိုင်ခန်း တွံတေး ရှိ ရောင်းရန် ရုံးခန်း / ဆိုင်ခန်း ရန်ကင်း ရှိ ရောင်းရန် ရုံးခန်း / ဆိုင်ခန်း ရွှေပေါက်ကံ ရှိ ရောင်းရန် ရုံးခန်း / ဆိုင်ခန်း